Benishaangul Gumuzii fi Wallagga Bahaa Keessatti Namoonni Hedduun Hidhamanii Seeratti Hin Dhihaanne, Jedhama
Hagayya 05, 2020
Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz, Godinaa Matakkal, aanaalee Dibaaxii fi Bulan keessatti riphxee loltoota Waraana Bilisummaa Oromoo deggertu sababaa jedhuun namoota digdamaa ol qabamanii hidhaman, jechuun maatiileen namoota hidhamanii fi abukaatoon isaanii VOAtti himan.
Bulchaan Godinaa Matakkal Obbo Attinkuut Shittuu, “namoonni hidhaman, kanneen “Oneg Shanee” bilbilaan, nyaataa fi odeeffannoo kennuun gargaaraa turan,” jedhan.
Haaluma wal-fakkaatan, “magaalaa Naqamteetti namoonni hedduun eega hidhamanii baatii tokkoo haga baatiilee jahaa tahe, mana-murtiitti hin dhihaanne yokaan gadi hin lakkifamne,” jechuun himatu – abukaatoon isaanii fi maatiilee keessaa.
Itti gaafatamaam Biiroo Bulchiisaa Nageenyaa magaalaa Naqamtee, Obbo Misgaanuu Waaqgaarii, gama isaaniitiin, “namoonni hagi xiqqoon nageenya magaalattii waan jeeqaniif hidhamanii jiru. Yakki isaan raaw’atan qulqulleeffamaa jira,” jedhan.
Biiron Bulchiisaa fi Nageenyaa Oromiyaa immoo, “Oromiyaa keessatti namni yakkatti shakkamee qabamee mana-murtiitti hin dhihaatiin hin jiru” jedha. Gabaasaa guutuu caqasaa.
Mariin Hidha Laga Abbayyaa Sadarkaa Maalii Irra Jira?
Yunaaytid Isteetes Itiyoophiyaaf Meeshaalee Dhukkubsattoota Koviid-19 Ittiin Gargaaran Kennite
Namoota Yunaaytid Isteets Keessatti Sababa Vaayrasii Koronaatin Hojii Dhaban Gargaaruu Irratti Mariin Godhamu itti Fufeera
Kanneen Umriin 15 fi 24 Giddu Ta'etuu Caalaatti Vaayrasii Kornaan Qabame: WHO